အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ကျန်းမာရေး နဲ့ မုန့်လက်ကောက် (ဘာမှမဆိုင်)
ထားတော့.......နောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ ဘယ်ရုပ်ရှင်ကားထဲကလဲ ဖြေပါ။ (၂ မှတ်)
Posted by တီချမ်း at 9:25 AM
Labels: တီချမ်း မုန့်ဖုတ်ခြင်း, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အရွက်ကြော်
Heartmuseum April 10, 2012 at 2:33 AM
မုန့်လက်ကောက် ကြိုက်တယ်... လုပ်ထားတာ စားချင် စရာလေး စမ်းကြည့်အုံးမယ်....
နန်းညီ April 10, 2012 at 9:49 AM
အာကွာ.. တီ့ မုန့်လက်ကောက်ကြီးက ဖြူရော်ရော်ကြီး.. လှဝူး.. =(
Gloria April 10, 2012 at 10:10 AM
Is that NIKITA? I guess she is Amanda. :D
မဟုတ်မှလွဲရော နီကီတာ ပဲ ဖြစ်ရမယ် CW လို့ရေးထားတာလဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ကာ
တီချမ်း April 10, 2012 at 11:25 AM
အစုတ်ပလုတ်နန်းညီနဲ့ နှလုံးသားပြတိုက် ဘဲစားဘဲခြေပါ
ဂလိုရီယာနဲ့ တီစီ တယ်တော် ကြပါလား ဟုတ်တယ် နီကီတာပါ
ကဲ အဲ့တာဆို အဲ့လောက်တော်နေတဲ့ နှစ်ယောက်ကို နောက် တခု ထပ်မေးမယ် အမန်ဒါပါတဲ့ နောက်တကားကိုဖြေ
Evy April 10, 2012 at 11:56 AM
စားချင်လိုက်တာနော်။ ရုပ်ရှင် သိပ်မကြည့်တော့ တီမေးသမျှကားတွေအားလုံးကို မဖြေနိုပ်ပါ :-(
Gloria April 10, 2012 at 12:39 PM
I am team Damon.. How about you?
For VD, We are on team Klus, the original .. ha ha
But Amanda is not in VD :D.
Gloria April 10, 2012 at 12:48 PM
တီချမ်း Secret Circle ရောကြည့်ဖြစ်လား? Not bad.
အဲ့ဒါလဲ CW ကပဲ။
Gloira April 10, 2012 at 12:50 PM
Yes she is. She is Matt mother Kelly who make out with Taylor once. :P
Yes , u r rite. How about GG?
Gloria April 10, 2012 at 1:15 PM
Gosh I am so sick of GG. Season5is more than enough for their drama. But I want to see Blair and Chuck happily ever after in the end. Waiting for final episode. :D
Opps.. I was wrong.. my friend told me that she also play in VD. :D
တီချမ်း April 10, 2012 at 1:24 PM
hi both TC (is that initial for T Chen???LOL) and Gloria,
nah i don't think she is in VD? but may be i am wrong.........@-@
BTW i am team Damon as well like him since boone from LOST
and NO you both are wrong the answer to my question is TRUE BLOOD and i amateam Eric
i also watch GG and of course serena is my fav
not care about teh rest very much LOL and hate vanessa and dan but most of all LIly is the best
and bnow we back to the post
thanks Evy it is really delicious
Gloria April 10, 2012 at 1:47 PM
တီချမ်း Amanda က True blood မှာမပါဘူး Pam က Amanda နဲ့ဆင်တာ သူကသက်သက်တစ်ယောက်။ haha ဒီကလဲ Team Eric ပဲ။ စူကီ က book မှာတော့ Eric နဲ့ယူလိုက်တယ် on screen မှာတော့ ဘယ်လိုလဲ မသိဘူး။ Season5က June 10 မှာလာမှာ so looking forward to it. :D
PAUK April 11, 2012 at 10:14 PM
ဟိုအသီးက zucchini သီးပါ..။